Vaovao - paompy ceramic carbide silicon
Noho ny hamafiny avo, ny fanoherana ny harafesina avo sy ny tanjaky ny hafanana ambony, ny keramika karbôna silika dia be mpampiasa. Ireto misy lafiny manaraka indrindra: ny siansa karbônika karbôna dia misy fanoherana ny harafesin'ny simika, tanjaka avo, hamafin-kery, fanoherana mahery vaika, coefficient kely amin'ny friction, ary fanoherana ny hafanana avo, ka io no fitaovana tsara indrindra amin'ny famokarana peratra famehezana. Rehefa ampiarahina amina fitaovana grafit izy dia kely kokoa noho ny an'ny ceramika alumina sy ny alloys mafy ny coefficient ny friksi, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny soatoavin'ny PV avo indrindra izy io, indrindra amin'ny toe-javatra iasan'ny fitaterana asidra mahery sy alkaly.
Paompam-pasika karbônika karbôna dia manana hamafin'ny kery, tanjaka avo, hafanana avo ary fanoherana ny harafesina, ary toetra hafa, raha ampitahaina amin'ny androm-piainan'ny paompy metaly tsotra, ao amin'ny tontolon'ny fiantsonana iray ihany dia imbetsaka ny fotoam-panompoany na lava kokoa.
Ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia dia ny fifaninanana ifotoran'ny orinasam-pamokarana seramika karbôna. Miaraka amin'ny fihenan'ny harinkaren'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny ankamaroan'ny orinasa mpamokatra entana dia tsy afaka manantena afa-tsy ny fanarenana ara-toekarena ankoatry ny fifehezana ny vidin'ny famokarana. Mino ny manam-pahaizana fa amin'ny toe-karena henjana, ny mpamokatra mifandraika amin'izany dia tokony hampitombo ny tanjaky ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia, raha avy amin'ny kalitao, ny vidiny ary ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny lafiny hafa amin'ny ezaka hamakiana ny fikatsoan'ny tsena.